Die Casting အစိတ်အပိုင်းများ, လူမီနီယမ် Die Casting, အပိုင်း Casting ဆွဲငင်အား - Focusway
Focusway လူမီနီယမ် Cast ကို Die
Ningbo Focusway Machinery Co. , Ltd မှအစိတ်အပိုင်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုထောက်ပံ့ ချ. တဲ့ professional လူမီနီယံသေဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ tools တွေနဲ့, OEM ဝန်ဆောင်မှု One-ရပ်တန့်, သတ္တုများပုံသွန်း, စက်, မျက်နှာပြင်ကုသမှုသေဆုံး, သိုလှောင်မှုနဲ့တင်ပို့မှီတိုင်အောင်ပေးပါသည်။ ဒါဟာအစဖောက်သည်ရဲ့လိုအပ်ချက်အရသိရသည်နဲ့အခြားဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုပေးပါသည်။
အရေးအပါဆုံးဆိပ်ကမ်းကိုတဦးနှင့်တရုတ်၏စက်မှုလုပ်ငန်းအခြေစိုက်စခန်း ချ. ဖြစ်သော Beilun Ningbo မှာနေရာချထား Focusway ။ အဆိုပါကုမ္ပဏီ 2013 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး, 13000 ㎡andယခုအကြောင်းကို 120 န်ထမ်းရှိပါတယ်ယူထားသော။
ယင်း၏အခြေခံအုတ်မြစ်ကတည်းက Focusway ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကုန်ထုတ်စွမ်းရည်, တိကျခိုင်မာစွာအလုပ်လုပ်သဘောထားနှင့်ကျေနပ်မယ့်ကအကောင့်ပေါ်တွင်တစ်နှစ်လျှင်ခြင်းဖြင့်လျင်မြန်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တစ်နှစ်စောင့်ရှောက် ...
ထူးချွန် OEM နိုင်စွမ်း
လုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်အကျိုးရှိစွာစစ်ဆင်ရေးကဒီစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့စစ်မှန်တဲ့သရုပ်ဖော်ကြသည်။ သုံးဆယ်၏ပျှမ်းမျှအသက်အရွယ်နှင့်အတူငယ်ရွယ်အဖွဲ့ဝင်များ, ထူးချွန်, နှင့်တာဝန်များအပေါ်ယူဖို့အဆင်သင့်လိုက်စား, စိတ်အားထက်သန်မှုအပြည့်အဝရှိပါတယ်။
ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏အသက်ပေတည်း။ Focusway ISO9001 အရည်အသွေးမြင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်အတည်ဆောက်ခြင်း, ထောက်လှမ်းမျိုးများအတွက်ဓာတ်ခွဲခန်းဆောက်လုပ်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ရေးနဲ့ခိုင်မာတဲ့ QC အဖွဲ့ကဖွင့် setting ၎င်း၏အခြေခံအုတ်မြစ်ကတည်းကအရည်အသွေးပေါ်ကြီးမြတ်အရေးပါမှုအလေးထားခြင်းနှင့်ယခု IATF16949 စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားပြသခြင်းအတွက်ဖြစ်ပါတယ် ...
Precision, အစဉ်အမြဲတိုးတက်မှု, ပထမဦးဆုံးဖောက်သည်။
Tour အတွက် Group မှဓာတ်ပုံကို
# 25 Putuoshan လမ်း, Beilun, Ningbo, Zhejiang, တရုတ် 315806
အရောင်း: + 86-574-86816805
အထွေထွေအင်ဖို: + 86-574-86133932
浙 ICP 备 12345678 | ပံ့ပိုးမှု: LiWei ကွန်ယက်